Ọrụ nke ntinye data na azụmahịa - ndụmọdụ ọma maka ihe ọma
Otu ọkachamara na ụlọ ọrụ na-eji nchịkọta data taa. Ọ bụ nkà na ụzụ a ma ama maka ịmepụta nbudata nke data weebụ na-adịghị edozi ma na-agbanwe ya n'ime usoro nhazi. Nchịkọta data gụnyere ịgụnye URL site na iji robot na iji XPath, CSS, REGEX ma ọ bụ usoro ndị ọzọ kwesịrị ekwesị iji wepu ozi achọrọ site na webpage. Ya mere, ọ na-enye ụzọ nchịkọta ozi na-akpaghị aka site na weebụ.
Ka ọ dị ugbu a, ọtụtụ ngwọta nchịkọta data - sitere na ngwọta arụmọrụ zuru ezu nke nwere ike ịmegharị akụkụ zuru ezu n'ime ozi a haziri ahazi na usoro ad-hoc nke dị mkpa maka mgbalị mmadụ.
Nchịkọta data nwere ọtụtụ ngwa - himalaya butter lip balm. Nke a bụ ihe kachasị emekarị nke ntanetị weebụ na azụmahịa:
1. Ịnweta ntanetị online
Otu n'ime akụkụ dị mkpa nke nchịkọta data bụ na enwere ike iji ya mee ka profaịlụ azụmahịa na nyocha na weebụsaịtị. Ihe ọmụma enyere nwere ike inyere aka nyocha nke arụmọrụ nke ngwaahịa, mmeghachi omume onye ọrụ, na omume, wdg. Nchịkọta weebụ nwere ike depụta ma chọpụta ọtụtụ iri puku profaịlụ onye ọrụ na nyocha ha nke nwere ike ịba uru maka nchịkọta azụmahịa.
2. Na-ewepụ ngwaahịa na ọnụahịa data maka saịtị ntanetị
E nwere ntanetị weebụ na-arụ ọrụ na ebe nrụọrụ weebụ nke na-egwu na ahịa ahịa, nkọwa, na ihe oyiyi iji nweta data maka nhazi ma ọ bụ mmekọ. Ihe data a nwetara na ahịa nwere ike inyere aka na njikarịcha ọnụahịa, nke a gosipụtara iji meziwanye akụkụ ego bara uru site na pasent dị ịrịba ama. Ulo oru n'ime ulo oru e-commerce nwere ike iji uru ndi ozo nweta ihe nchoputa data iji jide n'aka na ha na-enye oge kachasị mma n'oge niile.
3. Nyocha ndị ahịa na nhazi
Nke a na-emekarị nke ọwa ọhụrụ na ebe nrụọrụ weebụ iji ghọta ndị na-ege ha ntị. Enwere ike iji data a kpochapụrụ iji mara àgwà nke ndị na-ege ntị. Maka otu ọwa, nke a nwere ike inye aka nye ozi maka ozi ndị ahụ. Ihe ị na-ekiri na ntanetị, dịka ọmụmaatụ, na-enye ụkpụrụ omume na saịtị weebụ nwere ike iji mara ihe ị masịrị.
4. Ijikwa aha ntanetị
Taa, ụlọ ọrụ na-etinye ọtụtụ nde mmadụ n'ịnọgide na-enwe nnukwu ọnụnọ n'ịntanetị, nchịkọta weebụ na-abụkwa otu n'ime usoro kachasị mkpa maka nzube a. Ighapu data nwere ike ịkọtakwu banyere usoro nlekọta aha njirimara gị dị ka ọ na-enyere gị aka ịghọta ndị na-ege ntị ị nwere olileanya na ị ga-emetụta nakwa akụkụ ndị nwere ike imerụ aha gị. Site na crawler weebụ a pụrụ ịdabere na ya, ị nwere ike ịkụziri ndị isi echiche, echiche na ederede, isiokwu ndị na-ewu ewu, na akụkụ ndị mmadụ dịka afọ na okike. Ị nwere ike iji ozi a maka uru gị.
5. Ịchọta ntụle aghụghọ
Mkpebi spamming , ma ọ bụ ederede nyocha na echiche na-ezighị ezi iji duhie ndị na-agụ ama aghọwo nchegbu kachasị maka ndị na-adabere na nyocha na echiche dị iche iche maka ntanetị dị iche iche. Nchịkọta weebụ nwere ike inye aka n'ịgba nyocha ederede, ikwenye ezi ndị, na ịchọpụta na igbochi ndị aghụghọ.
N'ọdị ugbu a nke data buru ibu na ịba ụba asọmpi, ejiji nchịkọta data adịghị agwụ agwụ. Ahịa gị nwere ike ịchọta ma ọ dịkarịa ala otu ebe ebe a ga-etinye data weebụ na uru bara uru. Nchịkọta data bụ otu akụkụ dị mkpa nke azụmahịa nke narị afọ nke 21.